Monténégro : Vao Maika Niteraka Fanontaniana Bebe Kokoa Fa Tsy Valiny Ny Fifidianana Solombavambahoaka Farany Teo · Global Voices teny Malagasy
Monténégro : Vao Maika Niteraka Fanontaniana Bebe Kokoa Fa Tsy Valiny Ny Fifidianana Solombavambahoaka Farany Teo
Voadika ny 08 Novambra 2016 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français
Tazana ankapobeny an'i Podgorica. CC-BY-20
Nahazo ny 40 %-n'ny vato ny Antoko Demaokraty Sosialista ary mihoatra lavitra noho ny an'ny Manda Demaokratika, antoko mpanohitra voalohany, izany. Saingy tsy afa-mitondra samirery ny Praiminisitra ary mety hialan'ireo mpanohana azy i Milo Djukanovic.
Mety hitarika fihozongozonana fa tsy fitohizan-draharaha ny vokatry ny fifidianana fanaovan-dalàna ao Montenegro. Raha nahazo ny 40 isanjaton'ny vato ny Antoko Demaokraty Sosialista (DPS), vondron'ny praiminisitra amperinasa, dia mbola mila ny fanohanan'ireo antoko ara-poko vitsy an'isa izy hanatrarana ny maro an'isa. Saingy mety ho afa-misarika ireo vondrona kely, izay leon'ny fanilikilihana mahazo azy isan'andro, sy ny haavon'ny kolikoly mbamin'ny fikambanan-jiolahy mampanahy ihany koa ireo antoko mpanohitra telo lehibe izay nahazo toerana 39 amin'ny 81 (raha 36 kosa ny an'ny DPS).
Nizotra tao anaty fihenjanana ny fifidianana tamin'ny alahady ary manamafy ny fisalasalana eo amin'ny fangaraharan'ny voka-pifidianana nolazain'ny mpanohitra izany. Nandritra ny fotoam-pifidianana mihitsy ny manampaherfana no nilaza fa nahasakana «fikasana famonoana feno misitery» an'i Milo Djukanovic. Serba miisa 20 no nosamborina ary nobahanana ny tambajotra sosialy raha nanomana fihetsiektsehana ny tao amin'ny mpanohitra. Kisendrasendra ratsy ho an'ireto voatonona farany izay nanontany toy izao : nanomana ny zava-drehetra ve ny teo amin'ny fitondrana hisorohana ny mety ho fiverenan'ny tranga tamin'ny oktobra 2015 ? Olona an'arivony teo ho eo, tamin'izany fotoana, izay mpankasitraka ny antokon'ny fanoherana no nanao fihetsiketsehana tao Podgorica, renivohitr'i Monténégro, mitaky ny fialan'ny praiminisitra. Nilamina ny fihetsiketsehana tamin'ny voalohany fa nivadika ho fifandonana rehefa nanatona ny Parlemanta. Nandefa etona mandatsa-dranomaso tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana miisa 5 000 tany ho any ny polisy. Nosamborina ny mpitarika ny fanoherana tamin'izany fotoana izany.
69 %-n'ny Monténégrins no tsy mankasitraka ny Governemanta
Tsy ho lany ny antony hanaovana fihetsiketsehana ato amin'ity firenena balkanika kely ahitana mponina 640 000 ity. Araka ny Eurobaromètre, fanadihadian'ny Vaomiera Eoropeana nivoaka tamin'ny volana mey teo, 69 isanjaton'ny Monténégrins no tsy mankasitraka ny zavabitan'ny governemanta eo amin'ny fitantanana ny toekarena, raha tsy matoky ny governemanta sy ny parlemanta ny 50 isanjaton'izy ireo. Ny 35 isanjaton'ireo nohadihadiana ihany no mihevitra fa mizotra amin'ny lalana marina ny firenena, raha manahy amin'ny fiakaram-bidim-piainana sy ny isan'ny tsy an'asa ny ankamaroan'ny mponina.
Any ivelany, mampanahy ny olona ihany koa ny toe-draharaha ao amin'ny firenena. Kandidà ho amin'ny fidirana ao amin'ny Vondrona Eoropeana i Montenegro hatramin'ny taona 2012, fa miatrika amin'ny fisian'ny fikambanan-jiolahy matanjaka dia matanjaka. Mahatsikaritra ny mponina ao Kotor, toeram-pizahantany ao Monténégro, fa « nanokatra efitra fihinanana sy toeram-pialamboly amin'ny alina ireo mpanondrana rongony mahery », ary miampanga amin'ny fampiasana ny zanak'izy ireo « hivarotra rongony ». Na dia ny Ben'ny tanàna, Aleksandar Stijepcevic, aza dia malahelo fa lasa « toeram-pifandonan'ny andian-jiolahy mifandrafy » i Kotor.
Firenena anjakan'ny fikambanan-jiolahy sy ny kolikoly
Nieli-patrana nanerana an'i Monténégro efa telopolo taona mahery izao ny fikambanan-jiolahy, noho ny kolikoly manimba ny sehatra avo amin'ny fitantanam-panjakana. Nandritra ny taompolo 1990, nikarakarak fanondranana sigara an-tsokosoko teo amin'ny sehatra eoropeana ny fanjakana monténégrin, seha-pihariana mitentina miliara dolara namelona ireo mafias ka hatramin'ireo tambajotra mpampihorohoron'ny Al-Qaïda sy ny Daesh.
Tamin'ny taona 2011, nandinika ny Parlemanta Eoropeana fa sarotra ny mahazo vaovao ahafahana mamoaka ireo trangan-kolikoly ao Monténégro, indrindra fa eo amin'ny sehatra famarotana amin'ny tsy miankina ireo orinasam-panjakana sy eo amin'ny fifaninanana ifanarahana. Toe-javatra izay tsy nahitana fanovana ifotony hatramin'izay. Tao amin'ny tatitry ny taona 2015-2016, nampangain'ny Amnesty International ny governemanta ho tsy manao izay rehetra tokony nataony hiadiana amin'ny fahantrana, amin'ny famonoan'olona ary amin'ny kolikoly. Mampahatsiahy ihany koa ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana fa mety ho nahatonga fisian'ny tsimatimanota tsikaritry ny Firenena Mikambana ny fomba fikarakarana raharahan-keloka an'ady ary manahy amin'ny fanafihana isan'andro mahazo mpamoaka vaovao ao amin'ny firenena ny fikambanana.
Etsy ankilan'izany, nampahatsiahy ny Human Rights Watch tao amin'ny tahirin-kevitra nivoaka vao haingana fa notazonina vonjimaika efa mihoatra ny herintaona izao ny mpamoaka vaovao Jovo Martinovic « ho tohin'ny fiampangana tsy azo inoana loatra amin'ny fanondranana zavamahadomelina ». Fantatra amin'ny famoahana fanadihadiana sy tatitra momba ny kolikoly, fikambanan-jiolahy ary heloka an'ady nitranga tao Balkans ity mpamoaka vaovao ity.
Melohin'ny Amnesty International ihany koa ny fampiasana tafahoatra ny mpitandro ny filaminana mandritra ny fihetsiketsehan'ny mpanohitra, ny fampijaliana mahazo ny mpikambana ao amin'ny fanoherana nosamborin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fanilikilihana mahazo ireo vitsy an'isa eo amin'ny sehatry ny fananahana, mahazo ireo mpialokaloka sy mpifindra monina.
Tao anatin'izany toe-draharaha izany no nandehanan'ny Monténégrins tany amin'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny alahady lasa teo. Raha nanapa-kevitra ny hanavao ny fitokisany amin'ny antokon'i Milo Djukanovic ry zareo, dia mety hahafaty ny governemanta reraky ny 25 taona nipetrahana teo amin'ny fahefana ny tsy fahaiza-mitantana ny toekarena, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary ny kolikoly.